प्रेस चौतारी पर्वतको अध्यक्षमा गिरी – Setosurya
पर्वत । प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा पर्वतको पाँचौं अधिवेशनले गणेश गिरीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कमिटि निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा कृष्ण अखेली, सचिबमा सुबास लामिछाने, सहसचिबमा नवराज गिरी र कोषाध्यक्षमा शान्ति सुबेदी रहनुभएको छ । समितिको सदस्यहरुमा रमेश पौडेल, राजेन्द्र भुषाल, लकास सुवेदी, दिपेश सुनार, विकासराज पौडेल, सोनु राना, गणेश पौडेल र राजन पौडेल रहेका छन् ।
यसअघि अधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्दै प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेले श्रमजीबि पत्रकारलाई पेशामा लागेर टिक्नसक्ने गरि राज्यले पेशागत ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशमा सबैखालका परिवर्तन भईसकेकाले अब आर्थिक संमृद्धी र विकासमा जोड दिने गरि कलम चलाउन संचरकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका सचिब रामकृष्ण शर्मा, केन्द्रीय सदस्य गणेश पौडेल, नेकपा एमाले पर्वतका सचिब तथा फलेवास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणी शर्मा, प्रदेश कमिटिका सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक मनोहर बि. पौडेल, उद्योग बाणिज्य संघ पर्वतका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष छविलाल तिवारी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सो अवसरमा प्रेस चौतारी पर्वत शाखाले स्थापना गरेको सिर्जनशील पत्रकारिता पुरस्कार गोरखापत्र दैनिकका पर्वत समाचारदाता गणेश पौडेल र रेडियो पन्चासेका संचालक गणेश पौडेललाई प्रदान गरिएको छ । लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर जिल्लाको चौतर्फी क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको भन्दै दोसल्ला र नगद पुरस्कारले सम्मान गरिएको हो । पुरस्कारको राशि ११ हजार १ सय ११ रहेको छ ।
२० वर्षअघिका प्रतिष्पर्धीलाई हराउँदै रेसुंगामा भुसाल विजयी
कुन राशीलाई शुभ कुनलाई अशुभ ? के गर्ने के नगर्ने भोलिको चन्द्र ग्रहण लाग्दै
खर काट्न गएका युवाको लडेर मृत्यु
हेर्नुहोस् झापाका स्थानीय तहको मतगणनाको अन्तिम परिणाम